Kremlin namaly ny famerenana amin'ny laoniny ny zon'ny rosiana Paralympians - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny Kremlin naka fomba fijery miabo ny famerenana amin'ny laoniny ny zon'ny rosiana Paralympic Komity (RCC) amin'ny MartsaIzany dia nilaza ny sekretera ny Filoha Rosiana Dmitry Peskov, ny RBC, ny tatitra."Isika dia azo antoka fa faly.
Ny olon-drehetra ao amin'ny firenena iderany ny herimpon'izy"hoy izy.
Ny Kremlin koa dia naneho ny fanantenana fa noho ny mahasoa ny toerana misy ny fanatanjahan-tena ny manampahefana, amin'ny farany", hoy izy ireo dia ho afaka ny hiverina ity pejy ity"ao amin'ny doping-baraka.
Teo aloha, tamin'ny febroary, dia fantatra fa ny Iraisam-pirenena Paralympic Komity (IPC) efa nanapa-kevitra ny fepetra hamerenana indray ny zon'ny RCC. Feno ny famerenana amin'ny laoniny dia azo atao raha toa ny rosiana komity manatanteraka ny toe-javatra rehetra ny IPC. Noho izany, rosiana mpanao fanatanjahan-tena afaka mifaninana eo ambany ny sainam-pirenena, ary dia ho afaka ny handray anjara amin'ny Paralympic ny Lalaon'ny any Beijing sy ny any Tokyo izy ireo raha hihaona manokana ny fitiliana ny toe-piainana. RCC mpikambana naato rehefa amin'ny ny vaomiera mahaleotena 'izao Tontolo izao Manohitra ny Doping Agency (WADA) dia nametraka ny tatitra nataony, araka izay ao Rosia dia tsy nisy ny fanjakana ny fandaharana ny doping sy ny fanoloana ny atleta' santionany. Rosia mandà ny fisian izany fandaharana ao amin'ny sehatra ara-panjakana.
Rosoboronexport nandray ny fanondranana ny antontan-taratasy ho an'ny Kalashnikovs ny fahatsiarovana ny faha- andian, ny tatitra dia milaza fa eo amin'ny orinasam-panjakana orinasa website."Avy izany.
Mike Denaria Miantso Fandraisana Mpiasa Avokoa Ny Fiarovana Heloka Bevava Mpisolovava Mahazatra Toy Ny An'i Rosia Fanafintohinana Fandavana Mitombo Ny
Фирме пытарен радам санкт-Петербург
© 2022 Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.